Huawei P20 Plus နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်အသစ်များပေါက်ကြားသွားသည် Androidsis
Huawei သည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးယိုစိမ့်မှုများကိုဖယ်ရှားပစ်သည်မဟုတ်။ ဘာစီလိုနာရှိ MWC 2018 တွင် ၄ င်း၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းအသစ်များကိုတင်ပြရန်မဟုတ်ကြောင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုရက်သတ္တပတ်များကသူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးယိုစိမ့်မှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဒါကြောင့်ဖုန်းတွေအကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အသေးစိတ်သိပြီးသားပါ အခုတော့ Huawei P20 Plus အချက်အလက်အသစ်များ.
မတ်လ (၂၇) ရက်တွင်ပဲရစ်တွင်« P »အကွာအဝေးရှိပစ္စည်းသစ်များကိုပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီအဖြစ်အပျက်အတွက်တစ်လထက်မကရှိနေသေးတယ်။ သို့သော်, များစွာသောဒေတာပြီးသားဒီရက်စွဲမတိုင်မီပင်လူသိများကြသည်။ ယခုမှာအလှည့်ဖြစ်သည် Huawei P20 Plus သည်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုဖော်ပြခဲ့သည်.
ဖုန်းတွင်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိမည်ဖြစ်ပြီး Always on Display mode ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ Samsung, Google သို့မဟုတ် LG တို့မှဖုန်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသော mode ။ ဒါကြောင့်နှစ် ဦး စလုံးကြောင်းပုံရသည် Huawei P20 Plus သည်ကျန်အပိုင်းများကဲ့သို့ဤ mode ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ terminal မျက်နှာပြင်ကိုသက်ဝင်စရာမလိုပဲအချက်အလက်အမျိုးအစားများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဖုန်းသည် OLED panel တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ရန်ပုံရသည်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ဒီဖန်သားပြင်အမျိုးအစားကပိုများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည် အနက်ရောင် pixels ကိုပိတ်ထားရန် Modes သာအတွက်ထိရောက်သော နှင့်မျက်နှာပြင်ပိတ်နှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြရန်လိုအပ်သောသူတို့အားတက်ကြွထားခဲ့ပါ။ သို့သော်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားအတည်မပြုရသေးပါ။
ငါတို့လည်းသိနိုင်တယ် ဒီ Huawei P20 Plus ရဲ့ဘက်ထရီစွမ်းရည် ယခုအသစ်စစ်ထုတ်ခြင်းကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဖုန်းတွင် 4.000 mAh ဘက်ထရီပါရှိသည်ဒီဟာကသင့်ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေပေးမှာသေချာတယ်။ ဤသို့ဖြင့်အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များထက်သာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကမ်းလှမ်းလိုသည်။ ထို့အပြင်၊ အမှတ်တံဆိပ်သည်စက်၏ပရိုဆက်ဆာဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည် 970.
ဤရွေ့ကားကိရိယာနှင့်ပတ်သက်။ ယခုအချိန်အထိလူသိများတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာနောက်ထပ်ယိုစိမ့်မှုအချို့ရှိနိုင်မှာသေချာပါတယ် ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာတော့ Huawei P20 Plus အကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်ပါပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » အသစ်ထုတ်သော Huawei P20 Plus မှအချက်အလက်များ